Uhuru oo war kasoo saaray doorashada Xasan Sheekh, ballanqaadna sameeyey - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Nairobi (Caaismada Online) – Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee xalay la doortay Xasan Sheekh Maxamuud, oo mar kale kusoo laabtay hoggaanka dalka.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Kenya ayaa lagu yiri “Madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee loo doortay Jamhuuriyadda federaalka Soomalaiya, Xasan Sheekh Maxamuud.”
“Wuxuu fariintiisa hambalyada, madaxweyne Kenyatta ugu rajeeyey madaxweynaha cusub caafimaad wanaagsan iyo guul isaga oo la wareegaya hoggaanka, wuxuuna u xaqiijiyey sii wadista Kenya ee iskaashiga iyo saaxiibtnimada.”
Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa ka dhaxeeyey xiriir aad u xun oo ka dhashay taageerada Kenya ee madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe, iyo Farmaajo oo joojiyey khaatkii Kenya, kuna beddelay kan Ethiopia oo loo xiray dad ay isku dhow yihiin.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa sidoo kale horey uga dhaxeeyey xiisad ka dhalatay kiiskii badda ee Soomaaliya ay ku adkaatay, kaasi oo Maxkamadda ICJ uu geeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
The post Uhuru oo war kasoo saaray doorashada Xasan Sheekh, ballanqaadna sameeyey appeared first on Caasimada Online.